आफू महान्, अरू भुसुना- विविधा - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ ११, २०७६ भैरव रिसाल
सक्ता र शक्तिमा हुनेहरूले अमूल्य समयको सारै उपेक्षा एवं अपमान गर्न लागे । समयचेत शून्य हुँदै गए जस्तो लाग्यो । सार्वजनिक समारोह आयोजित गरिन्छन् । त्यस्ता अनुष्ठानमा जति उच्च तहको विशिष्ट व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्‍यो, मुख्य अतिथिमा उति नै समय घर्काएर मात्र उपस्थित हुने पश्चगामी अभ्यास हुन लाग्यो ।
उहाँहरू बाहेक अरूहरू त केही होइनन्, भुसुना हुन् भन्ने मानसिकता मौलाउँदै गएको छ । ती सर्वोच्च व्यक्तित्वलाई आमन्त्रण गर्ने सामाजिक प्राणीमा पनि के–के हो अगतिशील पर्खने प्रवृक्ति देखिन लाग्यो ।
यस्ता विशिष्ट आसनमा बस्ने व्यत्तित्वलाई एउटा समय र अरूलाई अर्कै समय दिने चुत्थो व्यवहार गर्ने असभ्य काम हुन लाग्यो । समारोह समयमा थाल्दै नथाल्ने स्वाभिमानविहीन व्यवहार हुन लाग्यो । यो प्रवृत्ति सर्वोच्च, उच्च आसनमा बस्नेमा मात्र सीमित नभएर मध्यम र तल्लो पदमा आसीनहरूमा पनि सर्न लाग्यो ।
एउटाका लागि अनेकौंका अमूल्य समय अपव्यय हुन लाग्यो । आयोजकलाई भन्यो थालौं न कार्यक्रम ? ऊ अमिलो मुख लाएर यताउता दौडिन्छ । एकैछिन, एकैछिन, आइपुग्नै लाग्नुभो भन्छ । फेरि यताउता दौडन्छ, अनेकौं अभिनय गर्छ । एक घन्टा बित्यो, सवा घन्टा बित्यो, ढेड घन्टा बित्यो, बल्ल सवारी हुन्छ, उहाँको । कति महाशय त अचाक्ली ढिलो भएकोमा क्षमायाचना गर्ने सामान्य शिष्टाचार पनि गर्दैनन् । ढसमस्स शोफामा उपरखुट्टी लाएर बन्छन् । मानौं उनी मालिक अरू सबै उनका दास ।
उहाँ हिँड्नुभो !
यस्तो अवस्थालाई उपयुक्त संज्ञा के दिने भन्ने सोच आयो र मैले ‘सामाजिक सामन्तवाद’ नामकरण गरेँ । यसको एउटा उपमा २०७६ जेठ ५ गते आइतबारको एउटा घटनाबाट आएको हो ।
मित्र कृष्ण केसीले माओवादी जनयुद्धको दौरान तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको ‘भैरव गण’ ले राजनीतिक माओवादी कार्यकर्ताहरूउपर गरेको चरम एवं बर्बर ताडना र यातनाको पराकाष्ठा, विभत्स दमनको सीमा उल्लंघनका दृश्यहरू दृश्याङ्कन गरिएको एउटा लघुवृत्त चित्र कुमारीहल (सिनेमा) कमलपोखरीमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम थियो ।
कृष्णले मलाई पनि डाकेका थिए, आउन करै गरेका थिए । सवारी साधनका लागि मित्र सुशील प्याकुर्‍यालसँग आग्रह गरेर गएको थिएँ । त्यहाँ हुनेसम्मको शिष्टाचार गरे ।
त्यो वृत्तचित्र हेर्ने प्रमुखमा आमन्त्रित रहेछन्, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ । मलाई प्रचण्ड बस्ने पंक्ति छेवैमा राखे कृष्णले । दायाँतिर दमननाथ ढुङ्गाना, हिसिला यमी, विनामगर थिए । हामी तीनैजना गफियौं ।
वृत्तचित्र देखाउँदैनन् त । पौने नौ भो, नौ भो । कृष्ण केसी यताउता दौडिन्छन्, मुख रातो भएको छ, पसिना आएको छ, कृष्णलाई । सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी सक्रिय छन्, सचेत छन् । कम्युनिष्ट कार्यकर्ता पनिसक्रिय छन् । दमनजीले भन्नुभो, ‘निकैअबेर भो डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित हिँड्नु हुन्छ । नभन्दै डा. दीक्षित हिँड्नुभो ।’
हामी पनि निस्कने कि भन्यौं । तर निस्कन भने निस्केनौं । हामी तीन जनाबीच राजनीतिदेखि अरू विभिन्न विषयमा उडन्तेदेखि गढन्तेसम्मका कुरा भए । मैले हिसिलासँग जिज्ञासा राखेँ, ‘खोइ हिसिलाजी, बाबुरामजीलाई फोनमा भेटै हुँदैन, क्या हो ?’
हिसिलाजीले हाँस्दै जवाफ दिनुभो, ‘मेरो त भेट हुँदैन ।’ हामी पनि हाँस्यौं । रमाइलो गर्‍यौं । तैपनि प्रमुख मान्छे आउँदैनन् । कृष्ण केसी उही असामान्य अवस्थामा थिए । हलमा कति जना त कराउँथे, सुरु गरौं भनेर । अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि हिँड्नुभो ।
साढे नौ बजेपछि खबर आयो, ‘प्रचण्ड आउनुभो’ भन्ने । अनि लगत्तै अर्को खबर आयो, ‘उहाँ रेष्ट रुम पस्नुभो’ भन्ने । अब सुरु हुने भो, मान्छे खुसी भए । प्रचण्ड हामीसँग हात मिलाउँदै त्यही पंक्तिमा बस्नुभो । वृत्तचित्र पनि प्रदर्शित हुन थाल्यो, भीषण भाषण केही भएन । वृत्तचित्र उत्तम थियो ।
यातनाका भयावह द्दश्य हेर्दा प्रायः मान्छेका आँखा रसाएका मात्र थिएनन्, बरबर आँसु नै झरेका थिए । त्यो वृत्तचित्र हेर्न जम्मा भएकामध्ये प्रायः आफ्ना मान्छे–छोराछोरी, श्रीमान–श्रीमती, आमा–बाबु, नाती–नातिनी, इष्टमित्र, आफन्त–बेपत्ता पारिएका मध्येका धेरै थिए ।
वृत्तचित्रको अन्त्यमा प्रचण्डको भाषण नै चित्रित थियो । तसर्थ अर्को भाषण सुन्नु परेन । जनयुद्धपछिको प्रचण्ड दुईपल्ट प्रधानमन्त्री– कार्यकारी प्रधानमन्त्री भैसक्नुभो । तर बेपत्ता मान्छेहरूको मरे बाँचेको पत्ता लागेको छैन । केपी शर्मा ओली पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बेपत्ता पारिएका मान्छेहरू पत्ता लागेनन् ।
दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भएको पनि यतिका भैसक्यो, तर बेपत्ता पारिएका मान्छे बेपत्ता नै छन् । बेपत्ता पारिएका मान्छेहरू पत्ता लगाउन गठित पहिलो आयोगले पनि पत्ता लगाउन सकेन । दोस्रो आयोग बनिसकेको छ, तर बेपत्ताहरूको पत्तो छैन । बेपत्ताहरू बेपत्ता नै छन् ।
मात्र हावादारी कुरा हुन्छन् । कुराको घ्यु लाग्दैन । विद्यादेवी भण्डारी दोस्रो कार्यकालको राष्ट्रपति छन् । उनका धर्मपति श्रीमान मदन भण्डारीको दुर्घटना वा हत्या पत्ता लागेको छैन । निरीह उनी प्रतीक्षामै छन् भने अरूको के कुरा ?
बरु आउन सक्तिनँ भनौँ
यो रचनाको आशय हो, आजको असजिलो र अस्वाभाविक अवस्थाको खोजी तथा चर्चा । परिस्थिति यस्तो छ, कोही पनि सन्तुष्ट छैन, तर कुनै उपाय सोचिँदैन । मान्छे खुला छैन । सामाजिक सञ्जालमा एकथरी झकझकाउँछन्, अरू केही देखा पर्दैन ।
केही विशेष दिवस मनाउँदा सडक सक्रिय हुन्छ, तर ? सेलाउँछ । केही प्रदर्शन हुन्छन्, धर्ना हुन्छन्, सेलाउँछन् । हाल मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सडक केही तात्यो । तर परिणाम शून्य छ । शिक्षा सम्बन्धमा एउटा अनुष्ठान आयोजना गरिएको रहेछ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मूल कक्षमा ।
केदारभक्त माथेमा जस्ता महामनाहरूको अग्रसरतामा त्यो अनुष्ठान आयोजित रहेछ, शिक्षा विषयमा । प्रचण्ड मुख्य अतिथि भई आउने भन्नुभएको रहेछ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निवासमा हुनुहुँदो रहेछ । सम्पर्क गर्दा आउँछु–आउँछु, एकैछिनमा आउँछु भन्दाभन्दै आउँदै आउनु भएनछ । माथेमाले प्रसङ्गमा भन्नुभएको मसँग ।
हो, यस्तै स्थिति वा अवस्थालाई प्रतिध्वनित गर्न ‘सामाजिक सामन्तवाद’ भनेको हो । जसमा नेताका साथै अरू पनि यस्ता छन्, जो समयमा आयो भने सानो भइन्छ भन्ने घमन्ड गर्छन् । त्यही भएर ‘सामाजिक सामन्तवाद’ मा एउटा अर्को वाद पनि थप्न मन लाग्यो, ‘घमन्डवाद’ स्पष्ट कुरा केही नहुने, हुँदै नहुने, कुरा पनि हुँदैन भन्न नसक्ने । आयोजकहरू पनि प्रमुख अतिथिलाई समयमा ल्याऊन नसक्ने ।
समयमा कार्यक्रम नगर्ने । कार्यत्रममा आमन्त्रित कति रोगी होलान्, ज्येष्ठ नागरिक होलान्, समयमा औषधि खानपर्ने होला, केही मतलवै छैन । खालि मुख्य मान्छेको मात्र बढी सम्मान गर्ने (सम्मान गर्ने शब्द पनि मिल्दैन कि चाकरी गर्ने) लामो समय कुराएर अन्य अभ्यागतको अपमान, चरम अपमान गर्ने आजको अवस्थालाई के सामाजिक सामन्तवाद भन्नु बढी होला र ?
जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसदेखि यस्तो सामाजिक सामन्तवाद अन्त्य गर्ने प्रण गरौं । सबै आमन्त्रितलाई एउटै समय दिऊँ । बोलाएको भन्दा ढिलोमा १५ मिनेटभिक्र कार्यत्रम सुरु गरौं । गणतन्त्र यस्तो हुन्छ, समयमा काम हुन्छ भन्ने सन्देश दिऊँ ।
आयोजक संस्था वा व्यक्ति प्रमुख अतिथिको बँधुवा मजदुर होइन भन्ने सन्देश दिऊँ । सामाजिक सामन्तवाद र घमन्डवाद उखेलौं ।
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०७:३५
जेष्ठ ११, २०७६ सरस्वती प्रतीक्षा
अधिकांश पोखरेलीले भने मुख्यमन्क्रीको समृद्घिको शरीर त्रय–विक्रयको रोडम्यापलाई ठाडै अस्वीकार गरे ।
मुख्यमन्त्रीको रेडलाइट एरियाको हल्ला विस्तारै सेलाउँदै थियो । एक्कासी उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले रेडलाइड एरियालाई नयाँ प्याकेजिङका साथ प्रस्तुत गरे, जसको नाम राखियो, ‘इन्जोय जोन’ ।
त्यसको डीपीआर तयार गर्न मन्त्रालयले ९ करोड बजेट छुट्याएको खुलासासमेत गरियो । मन्त्री लम्सालकै शब्दमा ‘इन्जोय जोनमा गाँजा, भाङ, धतुरोदेखि मदिराजन्य पदार्थ सबै र यौन क्रियाकलाप गर्नसमेत पाइन्छ । विदेशमा पर्यटकीय क्षेत्रमा यो सामान्य हो । हाम्रो देशमा मात्र इस्यु बनाइएको हो ।’
पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलको पर्यटन भित्र्याउने योजना पनि मन्त्री विकास लम्सालकै सोचको वृत्तमै घुम्छ । भन्छन्, ‘इन्जोय जोनभित्र रेडलाइट एरिया पनि सञ्चालन गर्ने हो भने थाइल्यान्ड जाने पर्यटकको गन्तव्य पोखरा हुनसक्छ ।’
थाइल्यान्ड अर्थात पीडाल्यान्ड
थाइल्यान्डका पर्यटकहरू भित्र्याएर पोखरालाई समृद्घ बनाउने सोच पाल्ने हाम्रा पर्यटन मन्त्री एवं पर्यटन परिषदका अध्यक्षका भनाइहरू पत्रपत्रिकामा छाइरहँदा केही समय अगाडि थाइल्यान्डबारे गरिएको एउटा सर्वेक्षण याद आयो । सर्वेक्षण भन्थ्यो, ‘थाइल्यान्ड एउटा यस्तो देश हो, जहाँ स्कुलका शिक्षक–शिक्षिकाभन्दा बढी पेसेवर यौनकर्मीहरू छन् ।’
पोखरालाई पटाया बनाउने सिलसिला सुरुभइरहँदा अर्को एउटा उखानको पनि बारबार बाडुल्की लागिरह्यो– ‘गुड गायज गो टु हेभन, ब्याड गायज गो टु पटाया ।’
आज वा भोलिको पोखरा कस्तो बनाउने ? त्यो हाम्रो वशमा छ । तर आजको थाइल्यान्ड कसरी यस्तो बन्यो ? त्यो स्वयं थाईहरूको वशभन्दा बाहिर थियो । त्यहाँको इतिहास पल्टाएर हेर्‍यौं भने थाहा हुन्छ– थाइल्यान्ड एउटा यस्तो देश हो, जहाँ महिलाहरूले कहिल्यै सम्मानित जीवन बाँच्नै पाएनन् । महिलाहरूले मान्छेको दर्जा नै पाएनन् ।
थाइल्यान्डमा अयुथया पिरियड आसपास अर्थात १३५१ देखि १७६७ सम्म महिलाहरू किनबेचका लागि राखिन्थे । खुलमखुल्ला बजारमा लिलामीका लागि राखिनु र जसले बढी मोल तिरेर किन्यो, उसैको गुलामीमा महिलाले जीवन काट्नु सामान्य मानिन्थ्यो । युद्घमा लड्ने बहादुर सैनिकलाई चढाइने उपहारको रूपमा पनि प्रयोग हुन्थे, महिलाहरू । जसको नाममा उपहार चढाइयो, उसैको दासी भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
विशेषगरी पन्ध्रौंदेखि सत्रौं शताब्दीसम्म महिला भनेकै पुरुषको सम्पत्तिमात्र हो भन्ने सोचाइ व्याप्त थियो । आफ्नो स्वास्नीलाई कुट्न, पिट्न अरू कसैलाई बेच्न हर लोग्ने स्वतन्त्र थियो । यति सम्मकी बहुपत्नी राख्नुलाई सम्मानित प्रथा मानिन्थ्यो ।
जति बढी स्वास्नी बटुल्न सक्यो, त्यति बढी सामाजिक हैसियत प्राप्त हुन्थ्यो, लोग्नेमान्छेलाई । श्रीमतीहरूको समेत वर्गीकरण गरिएको थियो, तीन तहमा– मेजर श्रीमती, माइनर श्रीमती र दासी श्रीमती ।
मेजर श्रीमती केटामान्छेको बाउआमाले चुन्थे आफ्नो छोराको लागि, जो घरकी शोभा हुन्थी । माइनर श्रीमती केवल गर्भाधारण गर्न र बच्चा पाउनका लागि प्रयोग हुन्थी । दासी श्रीमतीको कामचाहिँ लोग्नेको यौन प्यास मेट्नु र उसको मनोरञ्जनका लागिमात्र प्रयोग हुनु हुन्थ्यो ।
सन् १९३० मा आएर थाइल्यान्डमा कानुनी रूपमै बहुपत्नी प्रथाको अन्त्य भयो । मनोरञ्जनका लागि महिलाहरूलाई दासी बनाएर गरिने व्यवहार भने उस्तै रह्यो । बिसौं शताब्दीमा आएर मात्र राजा रामा पाँचौंले दासप्रथा उन्मूलन त गरे, तर पैसाका लागि महिला बेचबिखन हुने क्रम रोकिएन ।
सन् १९६० अघिसम्म थाइल्यान्डमा यौन व्यवसाय कानुनी कुरा थियो । राज्यस्वयंले वेश्यालयहरू चलाउँथ्यो र त्यसबापत कर असुल गर्थ्यो ।
गरिबीले आँखाहरू तिरमिराएपछि मान्छेको गलत र सही छुट्याउन सक्दैन । आफ्नैजमिन, काम र पैसाको अभावले राज्यले नै खोलेका वेश्यालयहरूमा स्वयंलाई बेच्नु ती दिनहरूमा कतिपय महिलाका निम्ति चर्को बाध्यता बनिदियो ।
विश्वयुद्घको चपेटाले पनि थाई महिलालाई नजानिँदो गरेर शरीरकै धन्दामा धकेल्यो । दोस्रो विश्वयुद्घताका जापानी सैनिकले थाई महिलालाई मनोरञ्जनका खातिर प्रयोग गरे र वेश्यावृत्तिमा लाग्न बाध्य बनाए । भियतनाम युद्घताका अमेरिकी सैनिकले पनि थाई महिलालाई सस्तो मूल्यमा आफ्नो यौन प्यास मेट्ने माध्यम बनाए ।
मछुवारहरूको ठाउँ भनेर चिनिने पटायालाई ‘सेक्स स्पट’ का रूपमा निर्माण गर्न अमेरिकी सैनिकहरूले ठूलो भूमिका खेले । संसार सामु आज यौन पर्यटनका लागि चिनिने थाइल्यान्ड ‘महिलाहरू मान्छे होइनन्, वस्तु हुन्’ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नेमा अग्रपंक्तिमा पर्छ ।
प्रेम जस्तो सुन्दर कुराको त ‘साइड इफेक्ट’ हुन्छ भने सिंगो देश नै सेक्स टुरिजमका लागि चित्रित हुँदा त्यसको साइड इफेक्ट नहुने भन्ने कुरै भएन ।
सबैभन्दा ठूलो पार्श्व प्रभाव के हो भने सन् १९६० मा नै थाई सरकारले वेश्यावृत्तिलाई गैरकानुनी भनेर घोषणा गरिसक्दा पनि खुल्लमखुल्ला वेश्यावृत्ति गरिनु । बैंकक पोष्टको रिपोर्ट अनुसार थाइल्यान्डको कुल राष्ट्रिय आम्दानीको ६० प्रतिशत हिस्सा पर्यटनले ओगटेको छ ।
पर्यटनको आम्दानीको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा फेरि यौन पर्यटनमा आधारित छ । यो आँकडाले पनि बताउँछ, थाइल्यान्डमा यौन व्यवसाय कानुनभन्दा माथि छ । पटायाको वाकिङ स्टेटको कुरै छोडिदिऊँ, साँझ पर्न नपाउँदै पटायाका कुनै पनि सामुद्रिक किनारा वा अन्य सडकका पेटीहरूमा ब्रा र पेन्टीमात्र लगाएर घाँटीमा २ सयदेखि ५ सय भाट अंकित ‘प्राइस ट्याग’ बोकेर उभिरहेका युवतीहरूको लस्कर देख्नु सामान्य लाग्छ ।
‘पिङपङ शो’ र पटाया पनि एकअर्काका पर्यायजस्तै हुन् । पिङपङ शो अरू केही होइन, महिला जननेन्द्रियहरूलाई मनोरञ्जनका खातिर कतिसम्म घिनलाग्दो तवरले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ, त्यसैको पराकाष्ठा हो । अलि फरक खाले पोर्न मुभीको एक प्रकारको लाइभ भर्सनभन्दा पनि हुन्छ, यस्ता शोहरूलाई ।
सन् २०१८ को एक रिपोर्ट अनुसार पटायामा मात्र २७ हजार महिला तथा ७ हजार पुरुष यौनकर्मी छन् । उमेर पुगेकाले आफ्नो इच्छामा धन्दामा लाग्नु एउटा कुरा । उमेर नपुगेका ससाना नानीहरूसमेत यौनका लागि प्रयोग गरिन्छन् ।
यौन उन्मादले ग्रस्त मान्छे जे प्रयोग गर्न पनि हिच्किचाउँदैन । यसका साथै थुप्रै आपराधिक क्रियाकलापको नदेखिने जरा थाइल्यान्डका पटाया, फुकेट जस्ता सहरहरूमा लुकेको छ भनिन्छ ।
संसारकै ‘सेक्स क्यापिटल’ का रूपमा थाइल्यान्ड बदनाम भएपछि त्यहाँको सरकारले आफ्नो छवि सुधार्न प्रयास नगरेको होइन । थाइल्यान्डका प्रथम महिला पर्यटन मन्त्री कोबकार्न वत्तानाव्रांगकुलले सन् २०१६ मै संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक पर्यटनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै यौन पर्यटन अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
देशको कुनै जालोमा देहव्यापार अड्केको भए पो कानुनी वा अन्य उपचारमार्फत उक्त उल्झनबाट निस्कन सकिन्थ्यो । देह व्यापारको जालोमा अड्केको देशलाई कानुन वा उपायले सफा गर्ने भन्ने प्रश्न भीमकाय छ । अहिले थाइल्यान्ड पर्यटनको हब त बनिरहेछ, तर कस्तो खालको ? यो पक्ष सोचनीय छ । देशको अर्थतन्त्रबाट यौन पर्यटन हटाइदिँदा सिंगो देशकै अर्थतन्त्र तहस–नहस हुने सम्भावना छ ।
थाइल्यान्ड आफै प्रदूषित भुमरीमा फँसेको छ र त्यसबाट निक्लने प्रयास गर्दैछ । त्यहाँको सरकार ‘ह्याप्पी जोन’को नयाँ अवधारणा अगाडि सारेर पटायाको इमेज सुधार्न प्रयासरत छ । यताको सरकार भने ‘इन्जोय जोन’को अवधारणामार्फत पोखरालाई पटाया बनाउन लागिपर्नु घातक छ ।
पोखरा भर्सेस पटाया
पर्यटन क्षेत्रमा एउटा भनाइ प्रचलित छ–इफ यु ह्याभन्ट बिन टु पोखरा, यु ह्याभन्ट बिन टु नेपाल । अर्थात् पोखरा गएका छैनौ भने नेपाल गएका छैनौ । यस भनाइले पनि पोखरा र पर्यटनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध बुझाउँछ ।
पोखराको ऐतिहासिक, सांस्कतिक, सामाजिक पृष्ठभूमिको जगमा उभिएर हेर्दा यो स्वच्छता र सौन्दर्यको एउटा ध्यानभूमि हो । यस्तो पावनभूमिलाई गाँजा र रक्सीको तालमा शरीर किन्ने र बेच्नेहरूको यौनभूमि बनाउन खोज्नु लज्जास्पद कुरा हो ।
गण्डकी प्रदेश सरकार डलर कसरी झार्ने भन्ने ध्याउन्नमा मग्न देखिन्छ । वर्षौंदेखि फेवातालमा उम्रिएको जलकुम्भी झार व्यवस्थापनप्रति आँखा चिम्लन्छ । त्यही फेवातालको बीचमा कफी हाउस खोलेर हजार डलरमा कफी बेच्ने सपना देख्छ ।
फेवातालमा देखिने माछापुच्छ्रेको छायाको ब्रान्डिङ गर्नुपर्नेमा ठूलो झण्डा बनाएर फेवातालमा झण्डाको छाया उतार्ने कुरामा विश्वास गर्छ ।
पर्यटनको सम्भावनै नभए अन्तिम अस्त्रका रूपमा ‘इन्जोय जोन’ निर्माण गर्नु एउटा कुरा । पोखरा त सम्भावना नै सम्भावना भएको उपत्यका हो । गुफा, तालतलैया, मठमन्दिर, नदीनाला, खोचहरूको सौन्दर्य सर्लक्कै एकातिर छ, अर्कोतिर साहसिक पर्यटन ।
प्याराग्लाइडिङ, बन्जी जम्प, र्‍याफटिङ, क्यानोनिङ, माउन्टेन बाइकिङ, वाटर बलिङ, ट्युबिङ, हाइकिङ जस्ता अनेकन साहसिक खेलहरूका माध्यमबाट पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ ।
अपवाद छोडेर कुनै त्यस्तो नेपाली फिल्म छैन, जहाँ कुनै न कुनै रूपमा पोखरालाई क्यामेरामा कैद नगरिएको होस् ।
कतिपय हिन्दी तथा अंग्रेजी फिल्म पनि पोखरामा सुटिङ गरिएका छन् । पोखरा फिल्मकर्मीका लागि प्राकृतिक स्टुडियो हो । इन्डोर तथा आउडडोर दृष्टिकोणले पोखरालाई फिल्म सिटीका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना उत्तिकै छ ।
केही दिन अघिमात्र डा. बसन्त गौतमको एउटा स्टाटस आएको थियो, ‘पोखरामा यतिखेर बिहान उठ्दा हेमन्तको कडा ठन्डी हुन्छ, ८ देखि १० बजे जतिसम्म शरदको कोमलताले भरिएको न्यानो मिल्छ । घाम चढ्दै जान्छ, त्यसपछि ग्रिष्मको कठोर रापले पोल्छ । २,३ बजेबाट वर्षायाम सुरु हुन्छ र ६,७ बजेतिर सकिन्छ ।
सुत्ने बेलासम्म शिशिरको सिरेटो चलिरहेको हुन्छ । आँखै अगाडि जता हेर्‍यो, त्यतै हरियाली र चराहरूको चिरबिर, जता हेर्‍यो, त्यतै वसन्त । एकैदिनमा छवटा ऋतु प्राप्त हुने गजबको छ, पोखरा ।’ मायावी हावापानी र मौसमका कारण पनि पोखरासित लठ्ठिन पुग्छ, मान्छे ।
पोखरा भनेकै लेकसाइड वरपर हो भन्ने भ्रमले धेरै कुरा बिगारेको छ । पोखरामा ‘इन्जोय जोन’ वा ‘रेड लाइट एरिया’ बनाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा पनि ताल वरपरका पर्यटकलाई मात्र लक्षित अवधारणा हो ।
एकातिर प्रदेश सरकार पोखरा आसपासका मौलिक नेपाली गाउँलाई ‘होम स्टे’का रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्दै कुर्लन्छ, अर्कोतिर पोखरा आएका पर्यटकलाई ताल वरपर नै रक्सी, गाँजा र यौनको रमझममा मात्र भुलाउने लक्ष्य राख्छ । कस्तो विरोधाभाष !
विश्वका दुस अग्ला हिमशृंखलामध्ये तीनवटा (अन्नपूर्ण, धौलागिरि र मनास्लु) त पोखराबाटै देख्न सकिन्छ । विश्वकै सबैभन्दा गहिरो गल्छी गण्डकी प्रदेशमै पर्छ । हिन्दुहरूले विष्णु अवतारको रूपमा पुज्ने शालिग्राम विश्वमै अन्त पाइँदैन, सिवाय गण्डकी प्रदेशमा ।
वनस्पति तथा जैविक विविधता पनि समृद्ध छ, पोखरा । २ सय ६० प्रजातिका त सुनाखरी छ, हामीसित र अनेकन जडीबुटीहरू । प्रसिद्घ मुक्तिनाथ धामदेखि ७ सय वर्ष पुरानो चराङको गुम्बा छ, गण्डकी प्रदेशसित ।
नेपालको हरिद्वार मानिने गजेन्द्रमोक्ष धाम अर्थात त्रिवेणी धामदेखि दामोदर कुण्डसम्मको धार्मिक पर्यटनको रुट ब्रान्डिङ गरेर लाखौं पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ । यस्ता सबै सम्भावना नकारेर खुला गाँजा र सेक्सको पछाडिमात्र दौडनु कतिको जायज हो ?
कवि तथा संस्कृतकर्मी तीर्थ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्रकृतिले दिएको उपहार बाहेक पर्यटकीय विकासका लागि के गर्ने भनेर पोखरामाकहिल्यै गम्भीर बहस भएन । न पर्यटन व्यवसायी, न राज्यसित पर्यटकीय विकासको कुनै ठोस र योजनाबद्घ रोडम्याप छ । इन्जोय जोनको अवधारणा पनि सोचविचार नैनगरी ल्याइएको प्रतीत हुन्छ ।’
सन् २०१६ मै गरिएको एक सर्वेक्षण अनुसार पोखरामा भित्रिने पर्यटकले दिनको सरदर पचास डलरमात्रै खर्च गर्छ । उसको औसत बसाइ जम्मा डेढदेखि दुई दिनमात्र हुन्छ । पर्यटकको संख्या बढाउन र बसाइ लम्ब्याउन ध्यान दिन आवश्यक छ । पर्यटकलाई जतिसक्दो लामो ‘होल्ड’ गराउन र खर्च बढाउन सकिए पोखराको पर्यटनले कोल्टो फेर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन ।
पोखरामा आउने पर्यटकको बसाइ अवधिले भन्छ, यो अझै पनि पर्यटकीय हबभन्दा ट्रेकिङका लागि आउने पर्यटकहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट बढी हो । यहाँका दुई–चार ताल वा गुफा देखाएर पाहुनासित ङिच्च हाँसो हाँस्दै ‘यही हो पोखरा’ भन्ने रेडिमेड प्याकेज पस्केको त वर्षौं भइसक्यो ।
एक डाँडादेखि अर्को डाँडा जोड्ने केबलकार बनाएर, हिमशृंखला अवलोकनका खातिर प्याकेजहरू अगाडि सारेर, धार्मिक पर्यटनलाई बढावा दिन आकर्षक विज्ञापन गरेर, यहाँका मौलिक सांस्कृतिक बाजागाजा र नृत्यमाभुलाएर पर्यटकलाई ४/५ दिन त यसै पनि भुलाउन सकिन्छ ।
कुनै दूरदर्शी योजना नबनाई लुकीछिपी गाँजा खाएकै छन्, यौनधन्दा चलाएकै छन् भनेर खुला गाँजा र यौन क्षेत्रका रूपमा पोखरालाई स्थापित गर्दा डलर त भित्रिएला, तर के पोखराले आफ्नो अस्मिता गुमाउँदैन ?
फ्रान्स र बेलायतमा पनि रेडलाइट एरिया खोलिएकै छन् भनेर उदाहरण दिँदै पोखरामा यस्तो अवधारणा अघि सार्दै गर्दा बुझ्नुपर्छ– हाम्रो देश ती देशका तुलनामा व्यवस्था र सुरक्षाका सवालमा कति अपरिपक्व छ ?
गरिब देशहरूमा जब–जब देहव्यापारले जरा फिजाउँछ, मानव बेचबिखनको समस्या सुल्झाउनै नसक्नेगरी विकराल बनेको इतिहास छ । कम्बोडिया, केन्या जस्ता देशहरू यस्तै खाले समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् ।
यसै त हामीले आफ्ना दिदीबहिनी बम्बईका कोठीहरूमा बेचिनबाट त रोक्नसकेका छैनौं, त्यहीमाथि ‘इन्जोय जोन’ का नाममा उनीहरूलाई बेच्ने लाइसेन्स दिनु कहाँको न्याय हो ?
खुला गाँजा र यौनले आफू सँगसँगै खुला हातहतियार, बालयौन शोषण र दुराचार, आपराधिक क्रियाकलाप, तस्करी, गुन्डागर्दी जस्ता पार्श्व प्रभावहरू पनि बोकेर ल्याउँछन् । त्यो सबको नियन्त्रण गर्न के हाम्रो प्रहरी प्रशासन सक्षम छ ? डलरको चस्माले आँखा टालिएपछि छातीमा प्राइस ट्याग बोकेर सिसाको शोकेसभित्र सजिएका हाम्रा दिदीबहिनीहरूको दुर्दान्त चित्र हामीले सम्झनसकेका छैनौं ।
खुला समाजको अर्थ खुला मानसिकता हो, छाडा मानसिकता होइन । ट्राफिक लाइट, जेब्राक्रस जस्ता सामान्य कुराको प्रयोगलाई लिएर त यहाँ चेतनाको कमी देखिन्छ । एउटी नेपाली युवतीले साँझपख ताल हेर्दै एक्लै एककप कफी वा बियर खाए आँखा तरीतरी हेर्ने संकीर्ण समाज छ ।
खुलेर आमाछोरी वा बाउछोराको बीचमा यौनको कुरा गर्नसक्ने पारिवारिक वातावरण अझै छैन । यस्तोमा सरकारी स्तरबाट मन्त्रालयबाटै बजेट विनियोजन गरेर कुनै सहरको अनुहार र अंग–अंगमै ‘इन्जोय जोन’को ट्याटु खोप्दा यौन र गाँजा व्यवसाय व्यवस्थित हुन्छ कि विशृंखलताको बाटोमा गएर नयाँ पुस्ता भड्किन्छ र झनै अल्मलिन्छ ?
विकासको रोल मोडल छान्नपरे किन नजिकैको सिक्किम नरोज्ने ? हाम्रो जस्तै प्राकृतिक सौन्दर्यलाई पस्केर सिक्किमले वर्षेनि चौध–पन्ध्र लाख पर्यटक भित्र्याउँछ । नेपालको दोस्रो ठूलो पर्यटकीय स्थल पोखराले सिक्किमको जति पनि पाहुना भित्र्याउन सकिरहेको छैन । यस्तोमा थाइल्यान्डका यौन पर्यटक तान्ने ताना काँडे भ्याकुरको सक्कली पखेटा उखेलेर कागजको नक्कली पखेटा लगाइदिएर उडाउन खोज्ने सपनामात्र हो ।
समाजको चेतना छिप्पिएपछि के कुरा खाँदा पच्छ, के खाँदा पच्दैन ? समाजले आफै तय गर्न सक्छ । समाजले नै रेडलाइट एरियाको आवश्यकता महसुस गरेर बहस र पैरवी गर्दै त्यतातर्फ जान खोज्छ भने त्यसलाई रोक्न हुँदैन । तर पोखरेलीको जनचाहनाको नजरअन्दाज गरेर केही नेता तथा पर्यटन व्यवसायीको पहलमा सिंगो सहरलाई ‘इन्जोय जोन’को ट्याग लगाउन खोजिनु कदाचित् स्वीकार्य हुँदैन ।
पटायालाई रोल मोडल मानेर त्यस्तैबनाउन खोज्दा पोखरा लज्जाको सुरुङ र खोचसँगै भास्सियो भने भोलि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
ट्वीटर : @saraswati_prati
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७६ ०७:३३